Mgbasa ozi site na WhatsApp, merie ndị ahịa site na izipu ozi | ECommerce ozi ọma
Mgbasa ozi site na WhatsApp, ahia site na izi ozi ahịa
Eva Maria Rodriguez | | Ahịa ahia, Ahịa ahịa
Nnukwu izipu ozi mkpanaka maka ụlọ ọrụ ga-ekwe omume ugbu a la Mgbasa ozi WhatsApp, a ọrụ e mere maka mmepe nke B2C mkpọsa site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa. N'ihi WhatsApp Marketing, ụlọ ọrụ nwere ike inwe nkwukọrịta ihe karịrị nde mmadụ 25 na Spain na ihe karịrị nde 400 gburugburu ụwa.
Ọhụrụ Ikpo ahia WhatsApp na-enye ohere maka nkwukọrịta ọhụụ maka ụlọ ọrụ, ọtụtụ n'ime ha na-eji WhatsApp iji kpọtụrụ ndị ahịa ha. WhatsApp Marketing si otú a zaghachi mkpa na ọchịchọ dị ugbu a n'ahịa.
Kemgbe WhatsApp pụtara na 2009 nwere usoro mgbanwe nke izipu ozi site na ngwaọrụ mkpanaka, nkwukọrịta abụghịzị otu. N'ezie, enwere ugbu a karịa ndị ọrụ 450 nde n'ụwa na-eji ngwá ọrụ a dị ka ụzọ nkwukọrịta, nke ihe dị ka nde 20 nọ na Spain.
Ikpo okwu nke izipu ozi mgbasa ozi site na WhatsApp Ọ dị mfe iji, ọ dịkwa mkpa ibubata nchekwa data ma ọ bụ kọntaktị site na ekwentị mkpanaaka ma mepụta otu ma ọ bụ karịa listi kọntaktị, depụta ozi ahụ, tinye ihe oyiyi ma ọ bụ foto, gbasaa ya na WhatsApp.
1 Nwere ike izipu mgbasa ozi na WhatsApp?
2 Onye n'azụ izipu mgbasa ozi site na WhatsApp
3 Olee otu esi akpọsa na WhatsApp?
Nwere ike izipu mgbasa ozi na WhatsApp?
Ahịa WhatsApp na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ ohere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ahịa, ebe ọ bụ na site na ọdụ data mkpanaka ọ ga-ekwe omume ịme, n'etiti ihe ndị ọzọ, ihe ndị a:
Zipu onyinye na-agụnyekwa onyonyo, ederede na vidiyo
Na-eduzi nzacha, gụnyere njikọ na weebụsaịtị
Zipu ozi ọma na mmelite banyere otu akara
Izipu malitere ịrịa videos, audios, ọnọdụ site na GPS na geolocation, ọzọ malitere ịrịa ọdịnaya mfe shareable site nnata nke ozi na ha kọntaktị
Zipu ọdịnaya na njikọ na peeji nke kachasị mma
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, WhatsApp Marketing jikọtara na ohere nke oke Mbupu nke SMS ọdịnala nwere ike nke ngwa ahụ WhatsApp, nke na-enye gị ohere izipu nnukwu ọdịnaya na ozi dị n'otu ozi, ọdịnaya nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịkekọrịta na kọntaktị ha naanị site na ijikọ na netwọk Wi-Fi.
Nnukwu uru nke jiri WhatsApp zipu mgbasa ozi ma e jiri ya tụnyere ahịa email bụ na a na-enyocha ngwaọrụ mkpanaka ọtụtụ oge n'ụbọchị, ọ dịkwa mfe ịgụ ozi WhatsApp karịa email na mkpanaka. Na mgbakwunye, ndị na-eji ekwentị eji arụ ọrụ na-etinyekarị anya na ihe ọ bụla ruru na njedebe ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ozi ahụ abịarute n'ụdị onyonyo ma ọ bụ n'ụdị vidiyo. Akụkụ ikpeazụ a bụ uru WhatsApp bara na SMS, yana ihe kpatara ọrụ a ji nwee ọganiihu.
Onye n'azụ izipu mgbasa ozi site na WhatsApp
- mkpu, ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị maka usoro ihe ọhụrụ a, na-akọwa nke ahụ «Ọ bụghị naanị na ọ ga-ekwe omume iru ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa nwere ike iji ekwentị mkpanaka, kamakwa otu ozi nwere onyonyo ma ọ bụ vidio vidio, site na ikpo okwu, ha ga-erute onye ọrụ WhatsApp ọ bụla ozugbo site na nkwupụta mkpanaka».
Agencylọ ọrụ ahụ na-akọwa na ya nchekwa data ekwentị mkpanaaka na-ekewa site na afọ, okike, mmasị onwe onye, ​​ebe obibi, ego a na-enweta kwa afọ yana ọbụlagodi na ha zụrụ ya Ịntanetị Nke o ji rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka ọnụego ya dịkwuo elu ntughari, n'omume ọ bụla na-ebilite. «Ndị ọrụ mechara nwee mmasị inweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a na-ajụ. Ihe ụdị akara ama ama dịka Pringles na Toyota arụworị, nke ahụ enweela nnukwu ọganiihu.
Olee otu esi akpọsa na WhatsApp?
Dị ka ọ dị taa, mkpọsa mgbasa ozi nwere ike ibute site na WhatsApp site na € 0.026 kwa ozi maka nchịkọta nke mbupu 5.000. Ọnụ ego kwa ozi na-ebelata ka ọnụọgụ ozi na ngwugwu na-abawanye.
Pịa na njikọ maka ozi ndị ọzọ gbasara otu esi eziga mgbasa ozi na WhatsApp
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Mgbasa ozi site na WhatsApp, ahia site na izi ozi ahịa
Echere m na okpukpu abụọ dị mma
Kpachara anya na ụlọ ọrụ WhatsApp na-ere ahịa, ha na-akwụ gị ụgwọ maka ọrụ ha na-enyeghị, ndị ọrụ dị iche iche katọrọlarịrị ha dị ka SCAM tupu ndị nchekwa obodo na ụlọ ikpe Malaga, m na-ekwu ya na ezigbo ink ebe ọ bụ na anyị nwekwara a ghọgburu ma tinye akwụkwọ ikpe megide ụlọ ọrụ na onye nchịkwa ya na onye nwe ya Maazị Gonzalo, onye na-ebo gị ebubo na ọ naghị arụ ọrụ na-agwa gị na ha achụpụla ya n'ụlọ ọrụ ahụ
Zaghachi Carlos Ruiz
Ndewo, na Office anyị na-eji ezigbo ngwá ọrụ maka izipu ederede, ọdịyo, foto na ozi vidiyo site na WhatsApp. A na-akpọ ya Whappend ma anyị enweela ezigbo nsonaazụ.
aha m bụ Antonio. Enwere m ụlọ ọrụ nwere ebe nchekwa data ndị ahịa, ebe m nwere nọmba ekwentị ha yana ụfọdụ njirimara na-eme ka o kwe m omume iduzi ụfọdụ ọrụ m na ndị ọzọ na ndị ọzọ, echiche m bụ ịme otu dị iche iche nke wassap ma zipụ ha ndị na-enye.
Mana isi ya bụ na ime ya na ekwentị ahụ m hụrụ na ọ dị ntakịrị ihe na-agwụ ike ma na-ewe oge, yana ihe m ga-achọ bụ inwe ike ịhọrọ otu ndị ahịa X site na kọmputa na nchekwa data m, ma zigara ha nnukwu ozi. Mana enwere ike ime site na kọmputa na nkasi obi.
You ma ma ọ bụrụ na enwere ngwa maka nke a nke nwere ike izipu SMS na kọmputa m na-ewere data site na nọmba ekwentị nke nchekwa data m nwere na kọmputa m?
M arụnyere ihe nkesa na Linux, enwere mmụọ ọjọọ iji mata BAM (Broadband Internet), m tinye apache na MySQL, na ị nwere sava weebụ, site na php ị nwere ike ịnweta arịrịọ dị ka nke ahụ, yana obere koodu, mmụọ ọjọọ sms ahụ ghọtara ozi ahụ wee zipụ ya, nke ahụ dị mfe, ọ bụrụ na ịchọrọ izipu ozi php ị ga-agụ mysql info wee ziga sms ahụ, eziokwu anaghị esiri ike ma dịkwa ezigbo ụtọ yana arụ ọrụ
Morningtụtụ ọma, Anyị nwere sms ụlọ ọrụ izipu igwe, ma anyị nwere mmasị ịme ya site na WhatsApp, ọ ga - ekwe omume na anyị nwere ike ịzụta usoro nnyefe? Anyị bi na Maracaibo. Venezuela
Zaghachi Elaine Basanta
Morningtụtụ ọma, na Mexico enwere ụlọ ọrụ yiri ya nke na-eji Hotspot maka ahịa ahịa, yana antenna ya ha maara karịa ndị ahịa ma nọrọ na ha. A na-akpọ ya Hostpot Mexico, ọ na-atọkwa ụtọ otu ha si eji hotspot maka azụmaahịa.
Nzukọ nke eCommerce na Online Marketing na-esote Mee 6 na Valencia
100.000 ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ejirilarịrị ahịa Shopify eCommerce